Araraoty tsara ny fotoana azo atao - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Ataovy ny ankamaroan'ny fahafahana
Tsy tianao ve ny hanitatra ny fotoananao? Na, tsara kokoa aza, avereno indray ny fotoana hampiasana azy io amin'ny fanindroany? Fantatsika rehetra fa tsy toy izany ny fandehan'ny fotoana. Tsy mitsahatra mikitika fotsiny izy io, na ahoana na ahoana ampiasantsika azy na fandaniam-poana. Tsy afaka manavotra ny fotoana lany isika, ary tsy afaka mamerina ny fotoana tsy ampiasaina. Izany angamba no antony nanomezan’ny apostoly Paoly toromarika ny Kristianina hoe: Koa tandremo tsara ny fitondran-tenanareo, tsy tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro [a. Ex.: Manararaotra ny fahafahana rehetra]; satria andro ratsy izao. Koa aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo (Efes. 5,15- iray).
Tian'i Paoly hahazo tombony amin'ny fotoana rehetra ny Kristiana tany Efesosy, hampiasa ny fotoanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tao amin'ny tanàna lehibe iray toa an'i Efesosy dia nisy fanelingelenana be dia be. I Efesosy dia renivohitry ny faritany romanina tany Azia. Ilay trano iray dia iray amin'ireo fahagagana fito fahiny - ny Tempolin'i Artemis. Tahaka ny metropolisy maoderina ankehitriny, be dia be ny resaka amin'ity tanàna ity. Nampahatsiahy ny kristiana anefa i Paoly fa nantsoina ho tanan'i Kristy ary sandry eto amin'ity tanàna tsy misy dikany ity izy ireo.
Manana talenta sy loharano daholo isika rehetra, misy 24 ora isan'andro. Mpanompon'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Tompontsika ihany koa isika, ary mampiavaka ny fotoanantsika amin'izao tontolo izao. Ny andrintsika dia azo zahana manome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy mahafa-po ny fitiavan-tena.
Afaka mampiasa ny ora iasantsika isika mba hanomezana ny mpampiasa antsika ny asa tsara indrindra, toy ny hoe miasa ho an’i Kristy isika (Kol. 3,22) fa tsy mahazo karama fotsiny, na ratsy kokoa, mangalatra amin'izy ireo. Afaka mampiasa ny fotoanantsika malalaka isika mba hanorina sy hanamafisana ny fifandraisana, ary hamelombelona ny fahasalamantsika sy ny fiainantsika ara-pihetseham-po, fa tsy handany izany amin'ny fahazarana maloto, tsy ara-dalàna, na manimba tena. Afaka mampiasa ny alina isika mba hialana sasatra fa tsy hientanentana. Afaka mampiasa ny fotoana ananantsika hianarana isika mba hanatsarana ny tenantsika, hanampiana ny olona sahirana, na hanolorana tanana fa tsy handry eo ambony fandriana fotsiny.
Mazava ho azy fa mila maka fotoana hivavahana isika Mpamorona sy Mpanavotra antsika. Mihaino azy isika, midera azy, misaotra azy ary mitondra ny tahotra, ahiahiny, ahiahy ary fisalasalana Aminy. Tsy mila mandany fotoana mitaraina, manompa na maneso ny hafa isika. Fa kosa isika afaka mivavaka ho azy ireo. Azontsika atao ny mamaly ratsy ny soa, manankina ny crises amin'Andriamanitra ary manalavitra ny fery amin'ny vavony. Afaka miaina toa izany isika satria i Kristy no mitoetra ao amintsika, satria nitarika ny fahasoavany Andriamanitra tamin'ny alalantsika. Ao amin'i Kristy dia afaka ataontsika ho sarobidy ny androntsika, zavatra iray manan-danja.
Tao an-tranomaizina i Paoly rehefa nanoratra ny taratasy ho an'ny Kristiana tany Efesosy, ary tsy afaka nanampy izy fa nahatsiaro tena isaky ny minitra izay. Eny, noho i Kristy niaina tao aminy, dia tsy navelany ho sakana ny fitazomana azy hanao izay tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Nampiasa taratasy tany amin'ny fiangonana izy, ary nanentana ny Kristiana hahatsapa fa tokony hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra.
Ny tranontsika ankehitriny dia mitovy amin'ny fitondran-tena maloto sy ny kolikoly izay niainan'ny Kristianina tamin'ny andron'i Paul. Saingy, hoy ny zavatra ampahatsiahiviny antsika, dia fahazavana iray ao amin'ny tontolo maizina ny Fiangonana. Ny fiangonana no vondrom-piarahamonina izay iaretan'ny herin'ny filazantsara sy zaraina amin'ny hafa. Ny mambra ao aminy dia ny masin'ny tany, mariky ny fanantenana ao amin'ny tontolo maniry fahazoana famonjena.
Nisy tovolahy iray izay niasa tamin'ny fikambanana iray ary notendrena hisolo ny filoha taloha sy mora tezitra. Andro vitsy talohan'ny nialany ny toerany dia nankany amin'ny filoha taloha ilay tovolahy ary nanontany raha azony omena torohevitra.
Lua teny, hoy izy. Fanapahan-kevitra tsara! Nanontany ny tovolahy: ahoana no hihaona amin'izy ireo? Hoy ilay antitra: mila traikefa izany. Ahoana no fomba nahatongavanao azy? nanontany ilay tovolahy? Hoy ilay anti-panahy: fanapahan-kevitra diso.
Enga anie ny fahadisoantsika rehetra hahatonga antsika ho hendry kokoa satria matoky ny Tompo isika. Enga anie hitombo hatrany hatrany ny fiainantsika. Enga anie isika hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny ataontsika ny sitrapony eto amin'ity tontolo ity.